LG Q6 wuxuu helayaa cusbooneysiinta Android 8.0 Oreo | Androidsis
Eder Ferreño | | LG, Noocyada Android
Yaab dhammaan isticmaaleyaasha leh LG Q6. Taleefanka, oo laga bilaabay sanadkii hore suuqa, waa mid ka mid ah moodooyinka ugu fudud ee noocyada noocyada Kuuriya. Sidaa darteed, qof kastaa wuxuu u qaatay inuusan heli doonin Android Oreo oo uu la joogi doono Nougat nooca ugu dambeeya ee Android. Gaar ahaan markaan tixgelinayno in summaddu inta badan ay cusbooneysiineysay moodooyinka dhammaadka-sare ah.
Laakiin ka hortagga dhammaan khilaafaadka, adeegsadayaasha leh LG Q6 ee Kuuriyada Koofureed ayaa bilaabanaya hel cusbooneysiinta Android 8.0 Oreo. Layaab aad u wanaagsan oo dhammaantood ah.
Maadaama LG lafteeda aysan horay u shaacin wax sii deynta noocaan ah nidaamka qalliinka ee taleefanka. Toddobaadkan dhammaadkiisu wuxuu ahaa markii isticmaaleyaashii ugu horreeyay ay bilaabeen inay ku helaan qalabka Android 8.0 Oreo. Marka waxaa lafilayaa in lasii daayo wadanka maalmahan.
Waxba lagama oga waxa ku saabsan bilawga caalamiga ah ee cusbooneysiintan loogu talagalay LG Q6. In kasta oo LG ay tahay shirkad inta badan u hoggaansanta cusboonaysiinta, haddana badiyaa kuma koobna suuqyada qaarkood. Sidaa darteed, waxay u badan tahay in sidoo kale laga bilaabi doono meel ka baxsan Koonfurta Kuuriya.
In kasta oo xilligan la joogo aynaan lahayn taariikhihii bilowga. Markaa waxay umuuqataa inaan ku qasban nahay waxyar sug inta LG Q6 ee Yurub ay cusbooneysiin karto. Waxaa suurtagal ah in shirkadda lafteeda ay ku dhawaaqdo daah-furkeeda toddobaadyadan.
Fajac wanaagsan ayaa ku ah milkiileyaasha leh LG Q6, maadaama ay dhawaan awood u yeelan doonaan inay ku raaxaystaan ​​Android 8.0 Oreo taleefannadooda. Sidoo kale lama oga haddii safka buuxa ee Q6s uu helayo cusbooneysiinta.. Waqtigan xaadirka ah, Koonfurta Kuuriya, waa qaabka caadiga ah ee helaya cusbooneysiinta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Noocyada Android » LG Q6 wuxuu bilaabaa inuu helo Android 8.0 Oreo
Spotify hadda waxay kuu ogolaaneysaa inaad kala soocdo heesaha liiska ku jira moobilkaaga Android